သခင်သိန်းဖေ ဈာပနအခမ်းအနား.(ရုပ်-သံ) | dawnmanhon
Photo: Htet Arkar,Thiha Tun/ RFA
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ၀ါးခယ်မ သခင်သိန်းဖေ (အသက် ၁၀၁) နှစ်ကို ရန်ကုန်မြို့ရေဝေးသုဿန် မှာ ဒီနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂူသွင်း သဂြိုင်္လ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အသုဘအခမ်းအနားကို နိုင်ငံရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ NLD နာယက သူရဦးတင်ဦး ၊ သခင်ချန်ထွန်း ၊ သခင်ဖေသန့် တို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက် ဂါရ၀ ပြုကြပါတယ်။
သခင်သိန်းဖေဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ "၀ါရင့်နိုင်ငံရေး သမားကြီးများအဖွဲ့ " မှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ရေး ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံပြီး အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံလိုပဲ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကို သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ထက်မှာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ သခင်သိန်းဖေက ဦးဆောင် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
သခင်သိန်းဖေဟာ သူမသေခင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရတာကို မြင်သွားချင်တယ်၊ ဒီမိုကရေစီ ရပြီးမှ သေချင်တယ်လို့ အမြဲနှုတ်ကနေ တဖွဖွ ပြောနေသူဖြစ်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။
dawnmanhon: သခင်သိန်းဖေ ဈာပနအခမ်းအနား.(ရုပ်-သံ)